-Dhacdo Shiinaha TWS Dhagaha-dhegaha oo leh Wax-soo-saar iyo Warshad aan daahayn oo hooseeya |Roman
Waqtiga Muusiga: 4.5H
Waqtiga Hadalka: 4.5H
Waqtiga heeganka: 75H
Waqtiga Dallacaadda: 2H
Battery-ga dhegaha: 45 mAh
Si otomaatig ah u xidhidhaynta ka dib iyo xidhidh caqli leh.
Bluetooth V5.0 , isticmaalka korontada waxaa la dhimay 30%.
Wireless-ka dhabta ah si ay u bixiso khibrad ciyaaraha fudud oo aan dib u dhac lahayn
Si xor ah u kala beddel qaabka Muusiga iyo Habka Ciyaarta: Waxaad si xor ah u beddeli kartaa hababka u dhexeeya Habka Muusiga iyo Habka Ciyaarta adiga oo saddex jeer ku taabto xakamaynta taabashada xasaasiga ah.
Xakamaynta taabashada buuxda: Iyada oo la adeegsanayo kontoroolka taabashada caqliga leh, waxaad xakameyn kartaa ciyaarta muusiga/hakinta, heestii xigta/heestii hore, ka jawaabida/dalka wicitaanka, qaabka ciyaarta iyo beddelka qaabka muusiga adiga oo taabto aagga dareenka dhegaha.
IPX5 Biyo Iska caabbinta: IPX5 Biyo-ilaaliyeyaashu waxay si hufan uga ilaalinayaan taleefoonnada gacanta ee wireless-ka dhididka ama buufinta biyaha, oo ku habboon orodka, barafka, iwm. (ma aha dabaasha).Qalabka dhegaha-dhegaha ee Bluetooth 5.0 waa doorashada ugu habboon ee hawlaha bannaanka.
Ammaan, Deggan iyo Raaxo Raaxo: Naqshadaynta ergonomic ee dhegaha-dhegaha TWS Gaming-ga waxay bixisaa taam aamin ah, deggan oo raaxo leh, si aanay si lama filaan ah uga soo bixin.
Sanduuqa baytari jilicsan ee guryaha iyo ku dallacaadda sameecadda.
1. Ka soo saar sameecadaha bidix (L) iyo midig (R) sanduuqa dallacaadda.Sameecado-madaxeedyada bidix iyo midig waxay si toos ah u dhammaystiraan lamaanaynta AiroStereo iyo isku xidhka, iyo tilmaamayaasha madax-madaxeedyada ayaa casaan iyo buluug beddel ah.
2.Maqalka wareejinta: Inta lagu jiro wicitaanka, dheeree batoonka MFB ee ku yaal taleefoonka madaxa ee kanaalka bidix/midig, oo sii daa ilaa dhawaaqa la soo jeediyo.Ku soo celi qalliinkan si aad codka ugu wareejiso taleefankaaga iyo dhegahaaga.
3. aamusi dami/dami: Inta lagu jiro wacitaanka, laba-guji furaha MFB ee dhinaca bidix ama midigta.Hawsha aamusnaanta ayaa shid, oo ay la socoto "dhabar-dhig" cod degdeg ah.Ku soo celi qaliinka.Hawsha carrabka la'aantu waa dansan tahay, oo ay la socoto "dhabar-dhig" cod degdeg ah.
4. Kajawaabista wac: Marka uu soo waco, taabo badhanka MFB ee taleefoonka gacanta ee kanaalka bidix/midig hal mar.Dhawaaq ayaa la soo jeediyay
5.Muusik ciyaarista/hakinta: Marka uu dhegaha dheguhu garaacayo muusig, taabo badhanka MFB ee taleefoonka dhegaha ee kanaalka bidix/midig si aad u hakiso.Ku soo celi qalliinkan si aad dib ugu bilowdo ciyaarta.
6.Enabling/Disable habka dib u dhigista hooseeya: Xilliga heeganka ama xaaladda muusiga, dhagsii furaha MFB ee bidix ama midigta madaxa dhegaha saddex jeer.Habka daahitaanka hooseeya waa la dajiyay, cod degdeg ah ayaa la ciyaarayaa, tilmaamuhuna wuxuu iftiiminayaa buluug.Waad ku celin kartaa hawlgalkan si aad u joojiso habka daahitaanka hooseeya.
Hore: Sawaxanka Dhaqdhaqaaqa ee Wireless-ka ee Saxda ah ee Joojinta Dhagaha
Xiga: TWS Bluetooth Earbud oo leh IPX5 biyuhu-ilaaliye
Dheecaanka Bluetooth oo leh Mic, Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0, Taleefannada Dhagaha ee Gudaha, Budhadhka dhegaha ee buuqa baabi'inaya, Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka ee bilaa-la'aanta ah, Bluetooth Mono Headset,